Somalia ayaa ku eedeysay Kenya in ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha doorashooyinka… – Hagaag.com
Somalia ayaa ku eedeysay Kenya in ay faragelin toos ah ku hayso arrimaha doorashooyinka…
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia, Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa sheegay inaanan eryid la eryay la oran karin Safiirka Kenya, tallaabadii ay qaaday Dowladda Somalya, ha yeeshee ay tahay arrin diblomaasiyadeed oo wadamada caalamka ay sameeyaan, marka ay jiraan arrimo xasaasi ah amaba tabashooyin.
“Horta aan ku saxo Safiirka Kenya lama eryin ee Dowladda Somalia ayadoo qabta tabashooyin ayaa waxay u yeeratay Safiirkeeda u fadhiya dalka Kenya, si aan wadaxaajood iyo wadatashi u sameyno, waxaana la faray Safiirka Kenya ee u fadhiya Somalia in uu caasimadiisa ku noqdo, oo uu la-tashi soo sameeyo. Marka eryid maaha waa nidaam diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood sameeyaan, markii ay jiraan arrimo xasaasi ah ama tabashooyin.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay VOA.
Wasiirka ayaa xusay in Kenya ay sidaan oo kale sameysay sanadkii hore, isla-markaana aanay Somalia ahayn dalkii ugu horeeyay oo tallaabadaasi qaada.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa Kenya ku eedeeyay in muddo ahba in ay culeys ku haysay Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Dowlad Goboleedyada, fara-gelin toos ahna ay ku hayso arrimaha doorashooyinka ee dalka, xilli dalna aan loo baahnayn in dal kale uu farageliyo.
Kenya waxay sheegtay in eedeymahaan loo soo jeediyay, iyadoo aan la xaqiijin faragelinta lagu eedeeyay in ay ku hayso arrimaha gudaha ee Somalia.